Topic: Nandita KC featured as an item girl – for the first time
Author Topic: Nandita KC featured as an item girl – for the first time (Read 8313 times)
Source: Nandita KC featured as an item girl – for the first time
Re: Nandita KC featured as an item girl – for the first time
11390163_926415147379710_2938062477825942494_n.jpg (129.12 kB, 768x768 - viewed 270 times.)
‘बेला त एसएलसी दिएपछि नै भएको थियो’ : नन्दिता केसी
भूकम्प प्रभावितको सहयोगार्थ ‘नाफ्का’ नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सिलसिलामा नन्दिता केसी केही साता देखि अमेरिकामा छन् । अमेरिका उड्नु पुर्व नायिका केसीसँग न्यूजपेजथ्री डटकमका लागि उत्सब रसाईलीले गरेको कुराकानीको केही सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
फर्कनु हुन्छ अमेरिका पुगेपछि ?
हन्ड्रेड प्रतिशत फर्कन्छु । अमेरिकाबाट कार्यक्रमको लागि क्यानडा पनि जाने कुरा छ करिब दुई महिना पछि म नेपाल फर्कन्छु । किनभने नेपाल फर्केपछि मेरो ब्याङ्कक, ल्हासा र साउथ अफ्रिकाको इभेन्ट छ, त्यसैल म नेपाल फर्कन्छु ।
तर, कार्यक्रममा गएका थुप्रै कलाकार उतै बसेका उदाहरण छन् नि ?
मान्छेको आफ्नो सोचाइ हुन्छ । परिवारीक योजना हुन्छ तर म चाहिं फर्कन्छु नै । त्यहाँ हुने ग्लोबल फेस्टिभलमा प्रस्तुती दिएर म नेपाल फर्कन्छु ।
के तपाइको अमेरिका बस्ने योजना नभएकै हो त ?
म यहाँ पनि विजी छु । फिल्महरु पनि पाइरहेको छु । म्युजिक भिडियो पनि गरि नै रहेको छु । बाहिरको कार्यक्रमको लागि अफर आइरहेको छ ।
अमेरिकामा खास मान्छे पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हा हा हा..एकदमै गलत हो । यो शतप्रतिशत झुठो हो । मैंले अरु बाट पनि सुनेको थिएँ, म के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने अमेरिकामा मेरो कोही खास मान्छे हुनुहन्न । बरु मेरो त्यहाँ दाइ भाउजु र मेरो मिल्ने साथी छ । म अहिलेसम्म सिङ्गल नै छु ।
अब मिङ्गल हुने बेला भएन ?
बेला त मेरो एसएलसी दिइसके पछि भएको हो । एसएलसी दिइसकेपछि नै मलाई विवाहको प्रस्ताव आएको हो । अहिलेसम्म आइ नै रहेको छ । तर कुरा के हो भने विवाह भन्ने कुरा चाहिं लेखेको हुने रहेछ । त्यसैले अब जहिले लेखेको छ त्यहिले नै होला ।
तर एक प्रकारको योजना त हुन्छ नि होइन ?
हाम्रो क्षेत्रमा चाहिं के हुँदो रहेछ भने जति काम गर्यो त्यति थपिने हुँदो रहेछ । अब यो काम सकेर विवाह गर्छु भन्यो फेरी अर्को राम्रो काम आउने । अहिले नै किन विवाह गर्नु पर्यो र एक दुई वर्ष पछि नै गरौंला भन्ने हुँदो रहेछ । अझै एक दुई वर्ष काममा व्यस्त हुन्छु । राम्रो फिल्मको पनि कुरा हुँदैछ । हेरौं त्यसपछि कोही राम्रो मान्छे भेटियो मन मिल्यो भने गरौंला ।
उमेर ढल्केपछि हिरोइनको घरजम गर्न समस्या परेको देखिएको छ नि ?
त्यस्तो नहोला । आफुले विवाह गर्छु भनेपछि कुनै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन । विवाह गर्ने समय आएपछि जो मान्छे राम्रो लाग्छ उही सँग गर्छु ।
तपाई राहत बाँड्न पनि हिड्नु भयो क्यारे होइन ?
हो विभिन्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत बाँड्न गयौं । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था दर्दनाक छ । सेतो कपडा लगाएका व्यक्ति देख्दा साँच्चै आँखा बाट आँसु आयो । शोकमा रहेका व्यक्ति देख्दा आफ्नै परिवार गुमेको महसुश भयो । हामीले वि फर् अल भन्ने संगठन सँग मिलेर राहत वितरण कार्य गर्यौं । अहिले हाम्रो टिमले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पोखरी चौंरी गाविसमा तीन वटा प्राथमिक विद्यालय बनाउँदै छ । वि फर् अल बाट हामीले भूकम्प प्रभावितको लागि आफ्नै पकेटबाट पनि पैसा निकालेर काम गरेका छौं । पछि चाहिं अस्थायी घर निर्माणको लागि सहयोग भैरहेको छ । राम्रो सन्देश जाओस् भनेर हामीले यो कार्य गरिरहका हौं ।
फिल्म करिअरलाई लिएर कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
प्रस्ताव आएका राम्रो राम्रो फिल्महरु गर्छु । अहिले पनि एक दुई वटा राम्रो फिल्महरुको कुरा भैरहेको छ ।
फिल्म क्षेत्रमा विगत एक दशक देखि हुनुहुन्छ, आफुलाई कुन स्थानमा उभ्याउनु हुन्छ ?
मान्छे भन्दा पनि मान्छेले गरेका कामहरु सफल हुने हुन् । मेरो कतिपय कामहरु सफल भए कतिपय असफल भएका छन् । र, म अहिले पनि संघर्ष नै गरिरहेको छु । किनभने जति म अगाडी बढ्छु त्यति नै नयाँ कुरा सिक्दै जान्छु । जन्मिदैं कसैले पनि सिकेर आएको हुँदैन । हरेक पाइलामा नयाँ कुरा सिक्दै गइन्छ, सिक्नु भनेकै संघर्ष गर्नु हो ।
फिल्म क्षेत्रमा हिरोइन बिच कत्तिको प्रतिस्पर्धा देख्नुहुन्छ ?
एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । तर मेरो स्वभाव चाहिं प्रतिस्पर्धामा जाने खालको छैन । म आफ्नो कामसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु । हिजो मेरो काम कस्तो थियो, आज मैंले त्यसलाई कसरी सच्याउँनु पर्छ भनी केलाउँदै जान्छु । तर, प्रतिस्पर्धा चाहि ‘टफ’ नै छ ।
भनेपछि अरुलाई पछारेर आफु अगाडी बढ्नु पर्ने भो ?
म मा चाहिं जेरो प्रतिशत पनि आउदैन कि अरुलाई पछारेर आफु अगाडी जाउँ । घर एक जनाले मात्र चलाएर चल्दैन । फिल्म क्षेत्रमा भनेको घर हो । हामी सबै घरका सदस्य हौं । मेरो घरलाई समाज चिनाउनु पर्यो भने मैंले मात्रै राम्रो गरेर चिनिदैन । घरको सबै सदस्यले राम्रो काम गर्नुपर्छ । त्यसैले मैंले अरुलाई पछार्ने काशिस गरें भने मेरो क्षेत्र कसरी बाहिर राम्ररी चिनिन्छ । फिल्म क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानु पर्यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाँदा सबैले राम्रो काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई पछार्ने भन्दा पनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
जे होस्, वर्तमान फिल्म क्षेत्रमा कुन हिरोइन अगाडी बढि रहेको देख्नु हुन्छ ?
रेखा दिदी (थापा) त फिल्म क्षेत्रको खम्बा नै हो । व्यस्तताको हिसाबले चाहिं प्रियंका (कार्की) अगाडी छ जस्तो लाग्छ । त्यस्तै केकी बैनी (अधिकारी) उसले पनि राम्रो नै गरिरहेको छ । नम्रता (श्रेष्ठ) को पनि राम्रो भइरहेको छ ।